संखुवासभामा जंगली च्याउ खाँदा बुबा छोरा बिरामी
संखुवासभा, बैशाख २३ । संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका-६ बाह्रबिसेका ४५ बर्षीय सुर्य बहादुर लिम्बु र निजको ६ बर्षीय छोरा आमोस लिम्बु जंगली च्याउ खाँदा बिरामी भएका छन् । सोमवार बेलुका घर नजिकै जंगलबाट टिपेर ल्याएको च्याउ पकाएर खाएका दुबै बुबा छोरा बिरामी भई जिल्ला अस्पताल खाँदवारीमा उपचार भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ ।
क्यान्सरका रोगीले खानैपर्ने जुसहरु
क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एउटा असाध्य रोगको रुपमा हामी सबैले बुझेका हुन्छौ तर आरम्भिक दिनमै ठम्याएर उपचार गर्नसके क्यान्सर पूरै निको हुनसन्छ । यो रोग लाग्दा क्यान्सर प्रभावित भागको कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने, अन्य तन्तुहरुमा पनि प्रसारित हुने र अनियन्त्रित वृद्धि भइरहेका क्यान्सर कोषहरु रक्त अक्सिजनको अभावमा मर्ने गर्दछ । अन्तत्वगत्वा अनियन्त्रित कोष वृद्धिकै कारणले क्यान्सर […]
स्वास्थ्यको लागि किसमिस खानुका फाइदाहरु
किसमिस ड्राई फ्रूट्स अन्तर्गत पर्दछ । यसमा सवै प्रकारको गुण विद्यमान छ । किसमिसमा आयरन, कैल्शियम, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट प्रयाप्त मात्रामा पाइन्छ । यसको सेवनले पाचन क्रियालाई सुधार्दै इम्यून सिस्टमलाई समेत बलियो बनाउदै जान्छ । किसमिसका अन्य फाइदाहरू १. रगतको कमिमा राम्रो फाइदा गर्दछ । रगतको कमि भएकाहरूले नियमित यस्को सेवन गर्नुपर्छ । किसमिसमा […]
रक्सी सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा हुने घातक असरहरु
सत्य युगमा देवता र दानव मिलेर समुद्र मन्थन गर्दा अमृत, मदिरा लगायत अन्य अनेकौँ चिजहरू उत्पन्न भएको कुरा हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख भएकाले मदिराको उत्पत्ति आदिकालदेखि नै भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आवश्यकता भन्दा अधिक मात्रामा मदिरा सेवन गर्दा अरू प्रकारका भोजनहरूबाट प्राप्त शक्ति सञ्चय हुँदै गएर मानिस मोटाउन सक्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । […]
भोजन को सँग गर्ने, को सँग नगर्ने
आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानमा भोजन को सँग, कहिले, कहाँ, किन र कुन परिस्थितिमा गरिएको हो भन्ने विषयको खासै महत्व नभएपनि प्राच्य स्वास्थ्य विज्ञानमा यी कुराहरुको ठूलो महत्व छ । १. दीर्घ जीवन र राम्रो स्वास्थ्य चाहनेहरुले सकभर बाहिरको खानु हुँदैन । परिवारमै खानु पर्दछ । परिवारमा खाना खाँदा आत्मियता बढ्दछ । परिवारमा खाना खाँदा खाना पनि […]
गोकर्णमा ५०० जनालाई खाना खुवाइँदै
काठमाडौँ, १७ वैशाख । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेका युवा क्लब तथा टोल विकास संस्थाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका वर्गलाई लक्ष्य गरी दैनिक पाँच सय जनालाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएका छन् । गोकर्णेश्वर ८ र ९ र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ६ मा लकडाउनयता बिहान र बेलुका व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले खाना वितरण गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् […]
बिरामी कुरुवाका लागि खाना
काठमाडौँ, १६ वैशाख । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न अस्पतालका बिरामी कुरुवालाई खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अव्यवस्थितरूपमा रहेका परिवार र जरुरी कामले हिँडेका बटुवा र सडकमा भेटिने असहायलाई खाना खुवाउँदै आएकामा कामपाले बिरामी कुरुवालाई खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको हो । कामपा वडा नं ३ ले दैनिक तीन हजार ७०० लाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको छ […]
रक्तनलीमा रगत बग्दा रगतद्वारा रक्त नलीहरूको भित्तामा दिइएको दवाब (चाप) लाई रक्तचाप भनिन्छ । यो चाप मुटु खुम्चिएर रक्तनलीमा रगत पम्प गर्दा धेरै र मुटु फैलिएर विश्राम गर्दा कम हुने गर्दछ जसलाई क्रमशः सिस्टोलिक र डाएस्टोलिक रक्तचाप भन्निछ । क्रियात्मक रूपले स्वास्थ्थ व्यक्तिमा सिस्टोलीक ९० – १२० एम्.एम्.एच्.जी. र डाएस्टोलीक ६० – ८० एम्.एम्.एच्.जीलाई सामान्य […]
कोरोना भाइरसलाई जित्न खानैपर्ने खानेकुराहरू
हाम्रो शरीर एउटा जीवन्त एकाई हो । यसले आफूलाई जीवन्त कायम राख्ने क्रममा दैनिक अनेकै जीव एवं सूक्ष्म-जीवहरूको आक्रमण सहन गर्नु पर्दछ । सूक्ष्मजीवहरूको आक्रमण संग लड्नका लागि हाम्रो शरीरमा छुटै प्रणाली छ जसलाई हामी प्रतिरक्षा प्रणाली भन्दछौ । प्रतिरक्षा प्रणालीले हाम्रो शरीरलाई ब्याक्टेरीया, भाईरस, ढूशी एवं परजीवीहरूबाट हुने आक्रमणबाट बचाउँदछ । शरीरमा सूक्ष्म जीवको […]
जण्डिस ठिक पार्न सहयोग गर्ने मूलाको पातको रस खानुका फाइदाहरु
मुलाको पातको साग खाने गरेको सबैलाई थाहा थियो होला तर पातको रसले जण्डिस निको हुन सक्छ भन्ने कुरा कमलाई थाहा हुन सक्छ । मुलाको पात खानुका थुप्रै फाइदाहरू पनि छन् । आजको लेखमा मैले मूलाको पातको रस खानाले हुने फाइदाबारे प्रकाश पार्नेछु । खासगरी पाचन प्रक्रियामा यसले प्रभावकारी काम गर्छ । मुलालाई सलाद वा अचार […]
कागती पानी खानुका फाइदाहरु
कागती पानी खानुका फाइदाहरु । कागती भिटामिन सीको स्रोत हो भने पानी हाम्रो जीवन हो । जब दुवै बस्तु हामीले मिलाएर सेवन गर्छौं भने नसोचेको फाइदा हामीले लिन सक्नेछौं । आजको लेखमा यसका फाइदाहरु के कस्ता छन् भन्नेबारे प्रकाश पार्नेछौं । आज पानीको सेवन कम गर्नाले थुप्रै रोगहरू हामीले पाएका छौ । कागतीसंग पानी मिलाएर […]
स्वास्थ्यको लागि पिप्पली खानुका फाइदाहरु
हाम्रो देशमा बहुमुल्य औषधि पिप्पली त्यसै खेर गइरहेको छ । जडिबुटी लोपोन्मुख हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता ताजा जडिबुटीबाट उपचार गर्ने पद्दतिको विकास गर्न सके तुरुन्त फाइदा उठाउन सकिने देखिन्छ । जडिबुटीको साहेताबाट नसोचेका रोगहरू निको बनाउन सकिने भएको छ । पिप्पलीलाई (Long Pepper) भन्दछन् । यसको फाइदाबारे अधिकांशलाई थाहा नहुन सक्छ । आज […]
गुणस्तरहीन नुन वितरण
सिञ्जा ३० चैत । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको समयमा यहाँको हिमा गाउँपालिकाले नेपाल साल्ट ट्रेडिङमार्फत नागरिकलाई बाँडेको नुन मिति नाघेको भेटिएपछि स्थानीयवासीबाट चर्को आलोचना तथा विरोध भएको छ । नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कार्यालय सिञ्जा डिपोबाट वितरण गरेको नुन सन् २०१६ र २०१७ को भएको भन्दै विरोध भएपछि स्थानीय प्रशासनले तीन दिनमा गुणस्तरबारे जानकारी […]
आयुर्वेदमा अश्वगन्धालाई प्रमुख औषधिको रूपमा लिइएको छ । यसको वैज्ञानिक नाम Withania Somnifera हो । यो सोलेनेसी कुलको बिरूवा हो । यो औषधि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ । अशोगधाको स्वाद घोडाको जस्तो भएकाले अश्वगन्धा भएको भन्ने एकथरी छन् भने अर्को थरीले यो औषधि सेवन गर्नाले घोडा जस्तो बलियो हुने हुनाले अश्वगन्धा हुन गएको भन्ने भनाई […]
ताजा र हरियो सागसब्जी खाउ रोगलाई जरैदेखि भगाउ
हरियो सागसब्जी नियमित सेवन गर्नाले हीट स्ट्रोक, क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जस्ता समस्यामा यसले राम्रो फाइदा पुर्याउन सक्छ । हरियो सागसब्जीमा प्रयाप्त मात्रामा प्रोटिन र खनिज भिटामिन पाइन्छ । मोटोपना र छाला चम्किलो बनाउन समेत यसले राम्रो मद्दत गरेको हुन्छ । आज विदेशीहरू हरियो सागसब्जी खानबाट बन्चित हुनाले अनेकौं रोगको दलदलमा फस्दैछन् । हाम्रो […]
स्वास्थ्यका लागि हाडे बदाम खानुका फाइदाहरु
यस्ता छन् स्वास्थ्यका लागि हाडे बदाम खानुका फाइदाहरु । बदामको सेवनले प्रोटिन र मिनरल हुने हुनाले मानिसको स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा गर्दछ । हामीले अनावश्यक खानालाई रोक्ने हुनाले भविष्यमा हुने थुप्रै समस्या यसले रोक्दछ । यसको नियमित प्रयोगले सुगरमा समेत फाइदा गर्दछ । अमेरिकन डाइबिटिज एसोसिएशनले समेत यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । बदामको गुदीमा पेट […]
काठमाडौँ, २६ चैत । कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नेपालमा फैलन नदिन सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । लकडाउनपछि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबैजसो रेष्टुराँ बन्द रहेका बेला काठमाडौँको डल्ले रेष्टुराँले भने अहिले अत्यावश्यकीय सेवामा कार्यरतलाई खाना खुवाउँदै आएको छ । लकडाउन शुरु भएको पाँचौँ दिनदेखि अत्यावश्यकीय सेवामा क्रियाशील २८० लाई दैनिक निःशुल्क खाना […]
राहत वितरणमा ढिलाइ
फिदिम, २५ । चैतबन्दाबन्दी (लकडाउन)को दुई साता बितिसक्दासमेत यहाँका अधिकांश स्थानीय तहहरुले राहत वितरण थालेका छैनन् । लकडाउनबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राहत दिने काम पाँचथरका अधिकांश स्थानीय तहमा शुरु भएको छैन । जिल्लाको फिदिम नगरपालिकाले मात्रै राहत वितरण थालेको छ । बाँकी सात वटा गाउँपालिकामा कतै […]
हाम्रो स्वास्थ्य सवल होस्, रोगसंग लड्ने क्षमतामा वृद्धि होस् भन्ने चाहना भए हामीले त्यस्ता खाना खाऔ, जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव होस् । आज मैले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर भेली कसरी खाने यसको प्रयोगबाट के के फाइदा हुनसक्छ भन्ने जानकारी पस्कने जमर्को गर्दैछु । भेलीमा सवै प्रकारको तत्व पाइने भएकाले यो खानाले थुप्रै फाइदाहरू छन् […]
अधिकांश तहमा सकिया पहिलो चरणको राहत वितरण
खस्यौली, २३ चैत । रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहले लकडाउनका कारण प्रभावित वर्गलाई पहिलो चरणको राहत वितरणको काम सकेका छन् । जिल्लाको सैनामैना नगरपालिकामा २ हजार ८ परिवारलाई १४ हजार ७६२ किलोग्राम चामल, २ हजार ८ किलो दाल, २ हजार ८ किलो नून, २ हजार ८ लिटर खाने तेल र २ हजार ८ थान हात धुने […]
आज २०७७ साल असोज ११ गते आइतवार आजको राशिफल